बिरामीको उपचार सँगै आर्थिक सहयोग गर्ने डा. रुपचन्द्रको बिदाई हुँदा बाजुरामा - बडिमालिका खबर
बिरामीको उपचार सँगै आर्थिक सहयोग गर्ने डा. रुपचन्द्रको बिदाई हुँदा बाजुरामा
बाजुरा — डाक्टर रुपचन्द्र बिश्वकर्माले बाजुरामा ४ बर्ष काम गरेर बिदाइ भएर गए । बाजुरा जन्मेका बिक जिल्ला अस्पताल बाजुराको प्रमुख भएर काम गरे । उनी बाजुरा बाट बिदाई सँगै एमडि पढनका लागि चितवन मेडिकल कलेज गएका छन् डाक्टर रुपचन्द्र बिक बाजुरा जस्तो दुुर्गम ठाँउमा सबै भन्दा बढि बस्ने चिकित्सक हुुन । उनले बिरामीको उपचार मात्र गरेर, आर्थिक अभाबमा पैसा नभएका बिरामीलाई सहयोग समेत गरे । जिल्ला अस्पताल बाजुरामा उपचार सम्भब नभएका बिरामीलाई जिल्ला बाहिर उपचार गर्न जादा उनले धेरैलाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए ।
बाजुरामा बस्दा डा. रुपचन्द्र बिश्वकर्माका यस्ता धेरै उदाहरण छन्, । धेरै दिनदुखिको उनि भगवान रुपमा साबित भएका छन् । कोल्टिमा सेनाको बिमान दुुर्घटनामा उनले घाइतेको उपचारमा खेलेको भुुमिका अझै चर्चामा रहेकाे छ। उनि धेरै बिरामीलाई मृत्युको मुुखमा पुुगेकालाई बचाउनमा सफल भएका थिए ।